Yini cryptocurrency kuthiwa zimali belulekwa ukuthengisa, futhi iyiphi ukugcina? - Blockchain Izindaba
Ukuphela May wadida embonini mfihlo nge okuphawulekayo Icebo lika bearish phezu exchange. Ngo senyanga lokugcina May, TOP-25 cryptocurrency wabonisa ukwehla lubonakale. Ngakho, ngo-May 22, bitcoin wawa ngezansi $ 8000 okokuqala kusukela ngo-Ephreli 18. Amadili E-ether kanye Bitcoin Cash yacwila 14% ngeviki, EOS – ngu 6%, futhi XRP – ngu 8.5%. Owinile kuphela ngesonto kwaba Tron (TRX), okuyinto labika ukwanda kancane izingcaphuno yayo.
Umkhuba wokulala omunye izimpawu umthengi oyinhloko – isilinganiso cryptocurrency pair of Ethereum futhi Bitcoin – futhi washintsha umuntu phansi. Ngenxa yalokhu, nezinye Altcoins, esekelwe Ethereum blockchain futhi, Ngakho-ke, engaphansi ngokwengxenye ku isikhundla salo, angawa ngokucijile uma izinga bitcoin liqhubeka lincipha. Ngesikhathi esifanayo, the ezuziwe cryptocurrencies emakethe ofeleba sehla $ 322.5 bhiliyoni, nokuwohloka ngu 14% kuqhathaniswa senyanga lesibili enyangeni kaMeyi.
Yini abahwebi okufanele nenze ngayo emakethe, okuyinto kwenzakala ngezidladla bearish? Okusanda, ibhizinisi zimali kakade kuhle abanamakhono izimpikiswano cryptocurrencies futhi kakade wazisa kakhulu abahwebi yini ukuthenga, lokho ukugcina futhi yini ukuthengisa. Nakuba ngo-January lo mkhuba phakathi Fiat zimali esikhulu wayengaphambi kalula.
Cryptocurrency zimali ukuncoma
Ngokwesibonelo, Spencer Bogart, a partner Blockchain Capital, ukholelwa ukuthi isimo samanje Ukuhwebelana kuzuzisa ukuthenga yimpumelelo. “Njengoba bitcoin esanda esetshenziswa kakhulu futhi kaningi futhi usenayo izithakazelo eziningi zezikhungo, kuwufanele nokutshala izimali kuwo. Zonke amabhange ezinkulu ozama ukuba asebenze naye, ukunikela amaklayenti abo. Ezinye evulekile zokuhweba amapulatifomu. A institutionalization ezijulile bitcoin ngokuvamile omuhle, “Isikhulumi sathi.
Naphezu Dynamics ukwehla cryptocurrency kwezwe yokuqala, Bogart kuyinto bullish kakhulu ngekusasa lakhe. “Can Bitcoin kube eshibhile? ngokuqinisekile. Kodwa Ngicabanga ukuthi ngonyaka eqeleni lakhe kuyoba ephakeme? ngokuphelele ukuthi, “- Wachaza i interview CNBC.
Isibikezelo sezulu sezinsuku Positive, Nokho, azisebenzi altcoins. “cryptocurrencies Abaningi overvalued futhi alithembekile. Kukhona ithuba ukuthi ziyosinda “ukudubula”, kodwa kudingeka babhekane nezithiyo eziningi kulolu, “Bogart wathi.
Omunye zimali ibhizinisi incoma ukuthatha sihlolisise Cardano (ADA), Tron (TRX), IOTA (selokhu) futhi NEO (NEO).
Ngokuthakazelisayo, Ngokuqondene Ethereum Spencer Bogart kunalokho baqaphe. “Into, kukhona okuningi ICO phezu Ethereum blockchain. Akwaziwa ukuthi yini eyokwenzeka kumuntu lezi zakhiwo, futhi indlela lokhu kuzothinta angabiki Ethereum Yiqiniso,” waphawula. “Ngokolunye uhlangothi, Ngingathanda ubambe kule esikhwameni of ezifana abadlali zizinkulu Ripple, Bitcoin Cash and EOS.”
Okunye mfihlo abathanda futhi baveze izibikezelo kunalokho baqaphe. “Okufanele ukwenze ku umkhuba bearish, okuyinto, Esikhathini esimaphakathi, is hhayi ukuqinisekisile yinoma yini? Kuyinto nakanjani ngeke kukusize ngalutho ukuthenga cryptocurrency ukuze zokucabangela. Uma uya ukuthatha okuthile izinyanga eziyisithupha noma unyaka, ke abathathi lutho. Uma uhleli kakade kuphothifoliyo isu lesikhathi eside, ke ukubamba, ngoba ku umkhuba yesikhathi esifushane akucaci ukuthi sizokwazi ukuba siphume futhi eqa aphinde ngentengo kahle. Ukuthengisa kwenza kuphela umuzwa uma abadayisi professional. Kodwa ngisho bangakwazi ukudayisa, Empeleni, kuphela rebounds lobuchwepheshe, ngakho noma kunjalo kungcono ukugcina izimpahla zabo. Ngenjwayelo, isincomo yami ukuba banake altcoins nge ofeleba ongaphakeme, ngoba manje emakethe sekuyahlwa, kanye altcoins emva bitcoin kuthiwa kucwila ngezinye izikhathi ezingaphezu.
Okufanele ukwenze ezimweni ngokuphelele ekuhlaselweni ukuwohloka kwezomnotho emakethe, abadayisi ngamunye uyazinqumela. Into ebaluleke kakhulu ukuba kahle yakha cryptocurrency yakho iphothifoliyo futhi Ungethuki uma kukhona ekushintshashintsheni emakethe. Ikakhulu oluyingozi njengoba cryptocurrency.
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 29.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 30.05.2018